Apple na-agbanwe obi ya ma ghara iweghachite nnọkọ ihu na Taa Taa na Apple | Esi m na mac
N'ụtụtụ a, onye ọrụ ibe m Manuel bipụtara akụkọ nke ọ gwara gị maka taa na nnọkọ ihu na Apple na United States na Europe. Agbanyeghị, ọ dị ka ụlọ ọrụ ahụ agbanweela echiche ya ma ugbu a ekpebiela ịghara iweghachite ha na August 30.
Apple ewepụtala nkwupụta ọhụrụ nke ọ na-ekwu na taa na klaasị ihu na Apple agaghịzi adị ka ọnwa Ọgọst 30, dn'ihi na -aga n'ihu na -abawanye nke ụdị ndị Delta nke coronavirus, ma na United States na obodo ndị ọzọ.
Mgbe Apple kwupụtara na nnọkọ taa nke Apple ga -adị ọzọ malite na Ọgọst 30, malitere ịnabata ndoputa maka klaasị ihu na ụfọdụ ụlọ ahịa.
Na mgbakwunye na egbu oge Taa na nnọkọ, Apple bụkwa mna -amụba ule COVID ma n'ụlọ ahịa ma n'etiti ndị ọrụ ụlọ ọrụ, ka Bloomberg kwuru. Ndị ọrụ na-esonye na mmemme nnwale ụlọ nke Apple ga-enweta ngwa ule ugboro abụọ n'izu kama ịbụ otu ugboro n'izu.
Site na mpụta nke ụdị ndị ọzọ na -efe efe dị ka delta, anyị kwenyere na nnwale ugboro ugboro ga -echebe gị na ndị ọrụ Apple niile nke ọma. Malite na Ọgọst 16, Quest ga -ezitere gị ngwa ule abụọ n'izu kama ịbụ otu.
Maka ugbu a Apple etinyeghị n'ihe ize ndụ ịkpọsa ụbọchị ọhụrụ nke nnọkọ ihu na ihu taa na Apple dị ọzọ, mana maka ugbu a, ihe niile yiri ka ọ na-egosi na ndị a ka ga-ewe ọnwa ole na ole ịlaghachi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple na-agbanwe obi ya, ọ naghị enwetaghachikwa nnọkọ ihu na Taa na Apple
Njirimara SharePlay agaghị adị na mwepụta nke MacOS Monterey
N'August 28, ihe ịma aka ọhụrụ nke ogige ntụrụndụ mba maka Apple Watch